Mahitsy – Ambohidratrimo: Mitaraina ho tsy mbola nahazo « Vatsy tsinjo » sy « Tosika fameno »
Tsy nisy nizara vary sy menaka na « Vatsy tsinjo » sy « Tosika fameno » izany taty Mahitsy, Distrika Ambohidratrimo nandritra izay fihibohana izay, hoy ny fitarainan’ny mponina ao an-toerana.
Mpianatra « sortant ENS »: Miisa 627 miandry ny « contrat » sy ny « décision » nampanantenaina azy ireo
Mitaky ny hivoahan'ny « contrat » sy ny « décision » ireo mpianatra nivoaka tao amin’ny ENS (Ecole Normale Supérieure) mba tsy ho ny olona niofana ho an'ny fanabeazana indray no hatao ambanin-javatra. Nisy lisitr'ireo mpianatra ENS voaray ho mpiasam-panjakana nivoaka tamin'ny Janoary 2020. Nampanantena ny minisitra tamin'izany fa Aprily 2020 no mivoaka ny « contrat » sy ny « décision » ho an'ireo mpianatra miisa 627 tafiditra tao anaty lisitra. Valo volana aty aoriana anefa tsy mbola ahitana mangirana ny fanatanterahana an’io.
Tapaka nandritra ny visio-COPRIES (Conférence des présidents ou recteurs d'Institution d'Enseignement Supérieur) ny 08 septambra 2020 fa hiditra amin'ny 2 novambra 2020 ny oniversite rehetra araka ny efa nambaran'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ny alahady 6 septambra lasa teo. Hanomboka amin'ny 28 septambra izao kosa ny famitana ny taom-pianarana 2019-2020 ho an'ny mpianatra tsy mbola nahavita izany araka ny fanapahan-kevitra noraisan'ireo filohan'ny Oniversite rehetra izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana izany.
Faritra voakasiky ny valanaretina coronavirus i SAVA, ao anatiny ny Distrika Sambava. Nisy efatra no namoy ny ainy noho io valanaretina io. Nanaja ny fihibohana, nikatona ny sekoly, nisy ny very asa, betsaka ny olona sahirana nandritra izany. Tsy mba nahazo “Vatsy Tsinjo” anefa i Sambava, hoy i Mamangy Norbert na Jack, solombavam-bahoaka voafidy tao Sambava, raha nivahiny tao amin’ny Radio Nasionaly Malagasy ny talata 08 septambra teo.
mardi, 08 septembre 2020 07:41
CEPE Fianarantsoa sy Mahajanga: 165 294 ireo mpiadina hiatrika fanadinana ny Talata 8 septambra
Hotanterahina ny Talata 8 septambra ny fanadinam-panjakana CEPE ho an’ny Faritany Fianarantsoa sy Mahajanga. Andiany faharoa io, taorian’ny fanadinana an’ny Faritany Antananarivo sy Antsiranana natao ny Talata 1 septambra 2020. Miisa 165 294 ireo mpiadina voasorana anarana hiatrika ny fanadinana amin’ireo Faritany roa ireo, izay mitsinjara amin’ny foibem-panadinana miisa 630. Miisa 62 590 ireo mpiadina voasorana anarana ao amin’ny Faritany Mahajanga, mitsinjara amin’ny foibem-panadinana miisa 245. Miisa 102 704 kosa ireo mpiadina voasorana anarana ao amin’ny Faritany Fianarantsoa, mitsinjara amin’ny foibem-panadinana miisa 385.
dimanche, 06 septembre 2020 20:15
Tahirin-tsary sy sary nindramina
06 Septambra 2019-06 Septambra 2020: Herintaona lasa no nitsidihan'i Papa François an'i Madagasikara
Feno herintaona katroka androany 06 Septambra ny fitsidihana apostolika nataon’i Papa Ray Masina François teto Madagasikara. Naharitra hefarana izany. Nanamarika ny fitsidihany teto ny fihaonany tamin’ny tanora sy ny Lamesa lehibe notarihan'i Papa teny Soamandrakizay ny 8 septambra 2019. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 06 septembre 2020 12:04
Vatsy Tsinjo: Nanjakan’ny kinamanamana sy fanodinkodinana
Miteraka resabe ny fizarana « Vatsy Tsinjo », na nampidirina an-tsehatra, nanadio ny lisitra hatramin’ireo minisitra sy mpiasan’ny ministera aza. Tsy eto an-drenivohitra sy ny manodidina ihany, fa na any amin’ny faritra aza dia andrenesana fimonomononana ary hatezeran’ny olona maro. Ahodin'ireo olona ao amin’ny Fokontany sy mpikambana amin’ny Komity Loharano ny fanampiana amin’ny toerana sasany, ka vitsy amin’ireo marefo sy tena sahirana ara-pivelomana tokony hisitraka ilay « Vatsy Tsinjo » no nahazo. Saika niafara tamin’ny fitsaram-bahoaka ny tranga tetsy Anosibe Angarangarana noho ny tranga toy io.Ataon’ny sasany fitadiavam-bola ny karinem-pokontany amin’ny toerana sasany. Misy ireo ankohonana manana karinem-pokontany fa tsy hita amin’ny fotoana nilana azy ka tangosan’ny ao amin’ny Fokontany 10 000 Ariary. Misy indray dia mpivarotra mpamongady no manangona ny vary « Vatsy Tsinjo » amin’ny sarety kely amin’ny vidiny 50 000 Ariary ny gony 50kg.
dimanche, 06 septembre 2020 11:50
Ady amin’ny Covid-19: Manantena horaisina mpiasam-panjakana ireo nirotsaka an-tsitrapo
Na tsy mbola tafavoaka tanteraka amin’ny ady amin’ny Covid-19 aza i Madagasikara. Porofon’izany ny mbola nanitarana 15 andro indray ny Fahamehana ara-pahasalamana eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara. Efa misy fivoarana makany amin’ny tsara kosa raha ny tarehimarika ofisialy avoakan’ny CCO, taterina isan’andro amin’ny haino aman-jery, mikasika ny fivoaran’ity valanaretina ity. Nanana anjara biriky tamin’ny fahazoana izany vokatra izany ireo mpilatsaka an-tsitrapo nantsoin’ny fanjakana, hiara-misalahy sy nifarimbona amin’ny ady amin’ny Covid-19. Nisy ny fampanantenana ny handraisana ho mpiasam-panjakana azy ireo. Miandrandra ny fanatanterahana izany ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo ankehitriny.
dimanche, 06 septembre 2020 11:32
Antohomadinika Antsalovana: Mirongatra ny fanendahana
Mihamazo vahana ny asa ratsy, fanendahana olona eny amin’ny manodidina ny fiantsonan’ny fitateram-bahoaka mihazo an’i Mahitsy, eo Antohomadinika Antsalovana. Mila ho isan’andro no ahenoana tranga. Manao andiany ireo mpanendaka. Mitondra antsy lava ny sasany. Mitangorona amin’izay olona hendahany.Miantso vonjeo ihany ny voahendaka fa tsy misy sahy mamonjy ny olona satria matahotra valifaty ataon’ireo mpanendaka. Misy ny tratra fa tsy maharitra ela any Antanimora dia afaka, ary manohy ny asa ratsiny indray.Tsy lavitra ny Poste de police Antaniavo sy ny Commissariat 67Ha ity toerana ity.
dimanche, 06 septembre 2020 11:22
Village touristique-Mahajanga: Maloto ny torapasika, misy fofona maimbo
Manaitra ny tompon’andraikitra ny olona fa misy fantsona lehibe mitondra rano mivarina an-dranomasina mamoaka fofona maimbo eny amin’ny « Village touristique ». Simba ny torapasika, toy izany koa ny tontolo iainana. Raha tsy voafehy io tranga io, hoy ny mponina, dia handao ity toeram-pitsangatsanganana iray amin’ireo mahasarika ny olona tonga eto Mahajanga ity ny olona, sy ireo mpanao vakansy sy mpizahatany tonga aty an-tanànan’ny voninkazo. (Jereo Sary Tohiny)